राजधानीमा 'सानो मन' भव्य प्रिमियर - ConfuseNepal
धरान २० विष्णुपादुका पहिरो पिडित राखिएको टेन्ट चुहिन थाल्यो
सुनिहाङ्मालाई न्याय नदिलाए नेपालमा थुप्रै सुनिहाङ्माहरुको हत्या हुन्छ- छथर गा.पा. प्रमुख
धरानमा रक्तदान कार्यक्रम सम्पन्न, १ सय ४ पिण्ट रगत संकलन
संविधान पुनर्लेखन हुनुपर्छः केपी पालुङ्वा
माइती पक्ष भन्छन सोनिहाङ्माको सड्यन्त्रका साथ हत्या भएको हो
२७ असार २०७६, शुक्रबार २७ असार २०७६, शुक्रबार कन्फ्युजनेपाल0Comments Ayushman Desh Raj Joshi, nepali movie, sano mann, shilpa maskey
काठमाण्डौ। बिहिवार साँझ राजधानी काठमाण्डौमा नेपाली चलचित्र ‘सानो मन’को भव्य प्रिमियर भएको छ । करिव पाँच सय जनाको उपस्थितीमा भएको प्रिमियरमा नेपाली चलचित्र तथा संगीत क्षेत्रका प्रवुद्ध व्यक्तिहरुको उपस्थिती थियो ।
प्रिमियर पश्चात चलचित्रकर्मीहरु तथा अन्य दर्शकले दिएको प्रतिक्रियाबाट चलचित्र यूनिट उत्साहित थियो । सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै निर्देशक सुयोग गुरुङ्गले भने, ‘चलचित्र हेरेपछि पाएको प्रतिक्रियाले मलाई ‘नर्भस’ बनाएको छ । मेहनतको कदर हुँदा खुशीले बोल्नै आईरहेको छैन । मैले मेरो क्षमताको साठी प्रतिशत मात्र काम गरेको छु जस्तो लागेको थियो तर मैले सय प्रतिशत नै काम गरेको रहेछु भन्ने भईरहेको छ । चलचित्र क्षेत्रका चर्चित व्यक्तिहरुले चलचित्र हेरेपछि मलाई अँगालो हालेर रुनुभयो । यसबाट मैले केहि राम्रो गरेको रहेछु भन्ने महशुस भयो’ ।
नायिका शिल्पा मास्केले नयाँ निर्देशकबाट यति धेरै अपेक्षा नगरेको भएता पनि प्रमाणित गरेको बताईन् । उनले भनिन्, ‘सुयोग(निर्देशक)बाट मैले यति अपेक्षा नै गरेको थिइन तर म चलचित्र हेरेपछि ‘नर्भस’ छु । यो सफलताको प्रमूख श्रेय निर्देशकलाई नै जान्छ’ ।
नायक आयुष्मान देशराज जोशीले निर्देशकको ‘कन्फिडेन्स’ले नै चलचित्र बनेको बताए । ‘हरेक शट लिनुअघि निर्देशकले गहन रुपमा सोच्नुहुन्थ्यो । शुरुदेखी नै डेब्यू निर्देशकमा ‘कन्फिडेन्स’ थियो’ ।
‘सानो मन’ शुक्रबारदेखी देशैभरका मल्टिप्लेक्स सहित सिंगल स्क्रिनहरुमा एकसाथ रिलीज भएको छ । चलचित्र ‘म्यूजिकल लभ स्टोरी’मा बनेको छ । बिशेषत: युवाहरुको मनोविज्ञानलाई यथार्थपरक शैलीमा प्रस्तुत गरिएको ‘सानो मन’लाई हरेक उमेर समूहका दर्शकले चलचित्रलाई उत्तिकै रुचाउने अनुमान गरिएको छ ।
यो चलचित्रमा आयुष्मान देशराज जोशी, शिल्पा मास्के, सक्षम सुवेदी, गौरी मल्ल, विशाल पहारी, शिशिर वाङदेल, रश्मी भट्ट, देव कुमार श्रेष्ठ लगायतका कलाकारहरुको अभिनय छ । यसै चलचित्रबाट निर्देशक गुरुङ्ग निर्देशनमा आएका हुन् । आलोक शुक्लाको डि.ओ.पि. रहेको चलचित्रलाई सुयोग गुरुङ र मिलन श्रेष्ठले सम्पादन गरेका छन् । समिर सुनुवार र निर्देशक गुरुङको संयुक्त लेखन रहेको छ ।
ओ.पि.जी फिल्मस्, ए प्लस इन्टरटेन्मेन्ट र हाई टेक इन्टरटेन्मेन्टले संयुक्त लगानी गरेको यो चलचित्र निर्माताहरू योगेश गुरुङ, राजीव श्रेष्ठ, रमेश के. मित्तल र राजेन्द्र मानन्धर हुन् । रित बोहरा मुख्य सहायक निर्देशक हुन् भने प्रोडक्सन म्याजेनर यम प्रसाद ओली हुन् ।
छक्का पञ्जा ३ सिरिजकै उत्क्रिष्ट
दि कर्माको जवानीको बजार लाग्या छ
← ‘सानो मन’को शिर्ष गीत गाउनेलाई गीत रेकर्ड गर्ने मौका, भिडियो पनि बन्ने
राहुलले नचाए आँचललाई, आयो दमदार भिडियो →
आश्विन ०५, २०७७ – धरान २० विष्णुपादुका आँपटार बस्तीमा गएको
आश्विन ०४, २०७७ – गत भादौ २२ गते धरान उपमहानगरपालिका वडा
आश्विन ०३, २०७७ – संविधान दिवसको अवसरमा शनिबार धरानको
आश्विन ०३, २०७७ – संविधान पुनर्लेखनका लागि दबाब सिर्जना गरी
आश्विन ०३, २०७७ – धरान ११ मा मृत्यु भएको सुनिहाङ्मा
भेटी र सहयोग रकमद्वारा पत्रकारीता पुरस्कार कोषमा पनि सहयोग
आश्विन ०३, २०७७ – किरात अर्न्तगत युमा शक्ति मान्ने युमा
चलचित्र ‘इन्टु मिन्टु लण्डनमा’ को पहिलो गीत सार्वज…
भुक्तानी सेवा प्रदायकको नयाँ अनुमति दिने कार्य बन्…
ए डिभिजन लिग विजेता मछिन्द्रलाई पाखा लाउँदै पुलिस …
थप १५६ जनामा काेराेना संक्रमण पुष्टि
राहतस्वरुप पाख्रीवास नगरपालिकाले करमा छुट...
बास्केटवल संघको सिफारिसमा १५ विद्यार्थीलाई डि...
कुलमान घिसिङको पुनः नियुक्तीकाे माँग सहित आज...
माइती पक्ष भन्छन सोनिहाङ्माको सड्यन्त्रका साथ...
धरान १ मा आगलागी, २ लाख बढीको क्षती...